Dhagayso: Xiisad ka taagan Qardho iyo Ciidamo is hor fadhiya | Waayaha
You are here: Home 2014 May Dhagayso: Xiisad ka taagan Qardho iyo Ciidamo is hor fadhiya
Qardho(WNT):-Magaalada Qardho ee xarunta Gobolka Kar-kaar waxaa ka socota xiisado ka Dhalatay Boqortooyada Daarood waxaana maanta lagu waday Qardho inay ka dhacdo caanu shubka dhaxal sugaha Boqortooyadan Axmed Boqor C/laahi.
Goobta ay ka dhaci lahaayd Caleema saarkan ayaa waxaa saaka la soo dhoobey Ciidamo kuwaasi oo hor istaagay dadkii gali lahaa caleema saarkaan ,waxaana ciidanka taabacsan yihiin sida uu sheegay Cumar boqor muuse Walaalkiis oo ku haysta Boqortooda wiilka uu adeerka u yahay.
Cumar boqor muuse sidoo kale waxa uu sheegay in Xaq Boqortooyad uu u leeyahay Wiilka uu dhalay ALLAHA u naxariisteen Boqor kiin kon balse uu jiro Burhaan Boqor muse oo sida uu sheegay taageero ka helaya xukuumadda Puntland.
Wararka waxa ay intaasi ku darayaan in hadda ay is hor fadhiyaan Ciidamo ka amar qaadanaya Burhaan Boqor iyo ciidanka amniga sugaya ee ku sugan halka ay ka dhacayso caleema saarka Boqor Axmed Boqor C/laahi.
Ka qayb Galka Caleema saarka Boqor Axmed iyo sidoo kale Doorashada Burhaan Boqor muuse ayaa waxaa ka qayb galkooda diiday Issimadda Puntland , taaso ay sheegeen in ay ka qayb galeeyn arrimo khilaaf ka oogan tahay.
Dadka deegaanka ayaa arintaa cabsi xoogleh ka muujiyay ilaa hadana dowlada pl wax war ah kama soo saarin boqortooyada la isku haysto walow la sheegayo in madaxweeynihi la safan yahay burhaan boqor .
Sidoo kale waxa jira Qaar ka mid odoyaal dhaqameedka ku dhaqan Qardhoo oo la kala safan labada dhinac ee isku haysta Bortooyada.
Dhagayso Cumar Boqor Muuse oo ka mid ah Qoyska reee Boqor isla markaasna Taabacsan dhaxal sugaha Boqortooyadan oo arimahaasi ka hadlaya.